Labsii magaalota oromiyaa pdf file
See more of biiroo pablik sarvisii fi misooma humna nama oromiyaa on facebook. Buuura labsii qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo oromiyaa irra deebiidhaan. Ittifayyadama lafa baadiyyaa haala guddina misooma. Version date size download copyright 2017 oromia public service and human resource development bureau portal. Labsii angoo fi hojii mana hojii oodiitii olaanaa oromiyaa murteessuudhaaf bahe manni hojii oodiitii olaannaa oromiyaa labsii qaamolee raawwachiiftuu mootum maa naannoo oromiyaa dhaabuuf bahe lakkoofsa 71988 tiin waan hundeef fameef, angoo fi hojii qaama kanaa seeraan mur teessuun barbaachisaa waan taeef, heera mootummaa naannoo oromiyaa. Labsii bulchiinsaa fi ittifayyadama lafa baadiyyaa. See more of oromia communication bureau on facebook.
Toannoo dambiilee fi qajeelfamoota aangoo bakka bu. Hiika akkaataan jechichaa hiika biroo kan kennisiisuuf yoo tae malee labsii kana keessatti. Inistiitiyutiin pilaanii magaalota oromiyaa danbii lakk. Labsiin kun labsii magaalota mootummaa naannoo oromiyaa hundeessuuf bahe lak. Wixinee labsii magaalota mootummaa naannoo oromiyaa hundeessuuf bahe. Labsiin kaffaltii beenyaa 4551997 fooyyae ethipian press agency.
Labsii bulchiinsaa fi ittifayyadama lafa baadiyyaa naannoo oromiyaa lakk. Akkaataa heera mootummaa naannoo oromiyaa fooyyaee bahe labsii. Lammiilee yeroo rakkoo kanatti diinagdeefi beekumsaan of tajaajiluu hin dandeenye. Mata duree gabaaba labsiin kun labsii bulchiinsa invastimentii mootummaa naannoo oromiyaa irra deebiidhaan murteessuuf bahe lak. Magaalota biyyattii addaddaatti lammiilee sababa misoomaan.
Buuruma kanaan mootummaan naannoo oromiyaa dambii lafa magaalaa irratti. Proclamations and regulations of oromia regional state. Caffeen oromiyaatifi godinoonni magaalonni keessatti argaman magaalota ajajuu hin dandaan, mariachiisuu malee. Labsii magaalota mootummaa naannoo oromiyaa irra deebiidhaan hundeessuuf bahe, lak. The national youth movement for freedom and democracy.
Labsiin haaraan magaalota oromiyaaf bahe, buufatawwan yaaddessoo ofkeessaa qaba, xiixalaa labsichaa. Pdf versionlabsii waloo mirgoota namoomaa afaan oromo oromiffa. Labsii lafa magaalaa fooyyaee bae mootummaan misomawaafi. Akka labsii kana keessatti irra deddeebiamee kaayametti magaalota walitti makuun, maqaa jijjiiruun, hogganoota filachuun, imammataafi tarsiimoo magaalaa hundi fedhii fi waliigaltee jiraattota magaalaa irratti hundaaya jedha. Labsiin haaraan magaalota oromiyaaf bahe, buufatawwan.
998 1072 43 1149 1009 394 424 566 5 741 1173 412 249 138 1038 1006 307 1237 1064 1275 294 613 1246 449 1322 988 740 1145 784